China high-nokunyuka steel yokuhlala mveliso kunye nabenzi | Honghua
Isakhiwo se-Guangdong GoTone (Idilesi entsha) Kubume besakhelo obungqingqwa, iintsika kunye neentsika zakhiwe ngohlobo olunye lokumelana namaxesha amiselweyo ngenxa yemithwalo. Ukuqina okubambekayo kwesakhelo esiqinileyo kuxhomekeke ekuqineni kweentsika, iigirders kunye nokunxibelelana kwinqwelomoya
Isakhiwo seGuangdong Gotone (idilesi entsha) ikumbindi weZhujiang Town entsha, eGuangzhou. Sisakhiwo esitsha seshishini seChina Mobile (Guangdong) Inkampani.
Icandelo lokwakha: iGuangdong yoNxibelelwano ngeFowuni, Ltd.
Iziko loyilo: IZiko laseGuangdong loyilo loyilo noPhando;
Indawo: IHuaxiaRoad, iZhujiang Idolophu eNtsha, iSithili saseTianhe, isiXeko saseGuangzhou;
Umhla wokuvulwa nokugqitywa kwekhontrakthi: Epreli 23, 2006 - Epreli 23, 2009
Uhlobo lokwakha: ibhokisi yokucheba
Indawo yokwakha: 121,547 yeemitha zesikwere
Inani lemigangatho: 37 ngaphezulu komhlaba, 3 ngaphantsi komhlaba
Ukuphakama kwesakhiwo: 165.2 m
Inqaba entsha yeHlabathi imi kufutshane neHuaxia Road kwindawo engumbindi weDolophu eNtsha yaseZhujiang, eGuangzhou.Yisakhiwo seofisi sanamhlanje esakhiwa yinqaba ephambili kunye nokwakhiwa kwesiketi.
Inqaba entsha iGotone ityalwe ngamashishini aphantsi korhulumente (awolwakhiwo) eZhujiang Idolophu eNtsha. Ibekwe njengesinye sezakhiwo eziphawuleka kakhulu eGuangzhou naseZhujiang Idolophu eNtsha. Isakhiwo seGotone sinemigangatho emi-3 phantsi komhlaba, imigangatho engama-37 ngaphezulu komhlaba, ubukhulu becala ineendawo zomsebenzi, ezinje ngolawulo lweofisi, imveliso yonxibelelwano, iholo yomboniso, ibala lezemidlalo kunye nentendelezo ephakathi. Umhlaba wokwakha ugubungela malunga ne-16,640 yeemitha zesikwere. Yintliziyo yokusebenza kweTshayina eyiFoni kwiPhondo laseGuangdong kunye neziko lenkxaso kwezonxibelelwano kwimidlalo ye-Guangzhou yase-2010.
Ukuthobela amanqanaba aphezulu esakhiwo sayo esiphezulu seofisi, ngaphakathi kwayo kusetyenziswa izinto ezikumgangatho ophezulu. Ezi zakhiwo zifunwa ngamancedo aphakamileyo aphezulu, ngakumbi xa iyonke inkqubo yolawulo lwendawo esembindini, kufuneka ibe yinkqubo eyomeleleyo nezinzileyo, ke ngoko, iGloba lBuilding entsha ikhethe iCrestron Central Control System. Okwangoku, lelona banga liphezulu, itekhnoloji evuthiweyo, eyona misebenzi igqithileyo, eyona nto isetyenziswayo, kukuqonda inkqubo yeofisi yolawulo oluphambili kunye nolawulo olukrelekrele lwezixhobo ze-elektroniki ezahlukeneyo kunye nokuphathwa kwabantu.
Njengenkxaso yonxibelelwano kunye neziko lokuyalela le midlalo ka-2010 yaseAsia, iGlobal Tower ixhasa imo yokusebenza enekhabhoni esezantsi kunye nokusingqongileyo, kwaye isebenzisa ubuchwephesha obahlukeneyo, izinto ezintsha kunye neetekhnoloji ezintsha kuzo zonke iinkcukacha zesakhiwo. Isakhiwo sinemisebenzi epheleleyo, kwaye sidibanisa indalo, ubuntu, ukuqonda, ukonga umbane kunye nokhuselo lokusingqongileyo.
Inkqubo yesakhelo esiqinileyo
Kubume besakhelo obungqongqo, imiqadi kunye neentsika zakhiwe ngohlobo olunye ukuze zikwazi ukumelana namaxesha amiselweyo ngenxa yemithwalo.
Ukuqina okubambekayo kwesakhelo esiqinileyo kuxhomekeke ekuqineni kweekholamu, iigirders kunye nokunxibelelana kwinqwelomoya
Kuyafaneleka kwizakhiwo zekhonkrithi eziqinisiweyo.
Ingasetyenziselwa ukwakhiwa kwesinyithi ngokunjalo, kodwa unxibelelwano luya kubiza.
Enye yeenzuzo zesakhelo esiqinileyo kukucwangciswa kunye nokufakwa kweefestile ngenxa yokuvulwa koxande.
Amalungu enkqubo yesakhelo esiqinileyo ayanyamezela ukugoba okomzuzwana, amandla okucheba, kunye nemithwalo ye-axial.
Izakhiwo ezinemigangatho engama-20 ukuya kwengama-25 zinokwakhiwa kusetyenziswa inkqubo yesakhelo esiqinileyo.
Izinto eziluncedo zesakhelo esiqinileyo kubandakanya ukukhululeka kolwakhiwo, ukusebenza kunokufunda izakhono zokwakha ngokulula, ukwakha ngokukhawuleza, kwaye kuyilo lwezoqoqosho.
Ubuninzi beam ubude yi-12.2m kwaye imiqolo emikhulu yesipan iya kuba kwimeko yokuphambuka ecaleni.
Ukungancedi kukuba ubungakanani bobunzima buxhathisiwe sisenzo esivela kwizakhelo eziqinileyo.
Okokugqibela, iBurj Al Khalifa lolona lwakhiwo lude emhlabeni lwakhiwa kusetyenziswa inkqubo yesakhelo esiqinileyo.
Egqithileyo Ulwakhiwo lwentsimbi yesikhululo sikaloliwe
Okulandelayo: Ukunyuka okuphezulu kwesakhiwo sentsimbi
Guangdong Honghua Construction Co., Ltd.(emva koku kubizwa ngokuba yi-Honghua) iyunithi yokwakha yenkampani yeQela, eneefektri ezimbini zokuxhasa izinto-i-Guangdong Huayu Structure Co, Ltd kunye ne-Dongguan Hongfa Steel Materials Co., Ltd. I-Huayu sisiseko esenziwe ngensimbi enzima egubungela ummandla we-0.15 yezigidi zemitha. I-Hongfa sisiseko sokuqhubekeka ngesinyithi kunye nommandla we-0.11 yezigidi zemitha. Umthamo wemveliso yaminyaka le yeziseko ezibini inokufikelela kwi-0.15 yezigidi zeetoni.
● Isiqinisekiso senkqubo yempilo nokhuseleko emsebenzini